MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Club Products FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1. MPT Club အစီအစဉ်မှာ ဘယ်လို ပါဝင်ရမှာပါလဲ။
2. MPT Club အစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်ပါသလဲ။
3. MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် အခကြေးငွေ ပေးရန်လိုအပ်ပါသလား(သို့) MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစားရိတ် တစ်စုံတစ်ရာရှိမှာပါလား။
4. MPT Club အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုပါက လက်ရှိကျသင့်နေသော အသုံးပြုခနှုန်းထားများ (ဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှုန်းထား၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခနှုန်းထား၊ SMS ပေးပို့ခများ) ပြောင်းလဲသွားမှာပါလား။ Voice Package၊ Data Package တွေရော ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမှာလဲ။
5. MPT၏ မိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်တွေက ဘယ်သူတွေပါလဲ။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည် )။ https://www.mpt.com.mm/en/mpt-club-en/ တွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
6. MPT၏ မိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်တွေက ရရှိထားတဲ့ MPT Point တွေကိုရော MPT ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လဲလှယ်နိုင်ပါသလား။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် MPTက ရရှိထားတဲ့ MPT Point တွေကိုရော MPTမိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်တွေမှာ လဲလှယ်နိုင်ပါသလား။
7. မိမိမှာ ယနေ့ ဖုန်းအသုံးပြုသော ငွေ ပမာဏ ရှိသော် လည်း အဘယ်ကြောင့် Point များကို နောက်နေ့ တွင် လက်ခံ မရရှိ သနည်း။
8. တစ်ရက်အတွင်းမှာ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အများကြီး လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသလား။
လူကြီးမင်း၏ MPT Point များကို သုံးပြီး အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။
9. သတ်မှတ်ထားတဲ့ USSD Code ကို ရိုက်နှိပ်ပြီး MPT Point ကို MPT ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လဲလှယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လဲလှယ်လို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
(၁) မိမိလဲလှယ်လိုသည့် MPT ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လုံလောက်သော MPT Point မရှိပါက လဲလှယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(၂) လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ်သည် one-way blocked (သို့)two-way blocked ဖြစ်နေပါက လဲလှယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(၃) ဖုန်းငွေဖြည့်ကာ ဖုန်းနံပါတ်ကို Active အဆင့်ရောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးမှ ပြန်လည်လဲလှယ်ပါ။
10. MPT Club member program ဆိုတာ ဘာလဲ။
MPT Club member program ဆိုတာ မူလ MPT Club ခံစားခွင့် များ ကို ထပ်မံ တိုးမြင့် ပြောင်းလဲပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
11. မိမိ ရောက်ရှိနေသော အခြေအနေ ရှိ ခံစားခွင့် ကိုမည်မျှ ကြာခံစား နိုင်သနည်း။
မိမိ ရောက်ရှိနေသော level ကို ရောက်ရှိသော လ မှ နောက် ၃ လ အထိ ခံစားနိုင် ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
12. နောက် member Level တက်ရန် မည်မျှ စောင့်ရမည်နည်း။
သတ်မှတ် ထား သော Member Level တခု ခြင်းစီ၏ ငွေပမာဏ ပေါ် ပြည့်မှီ ခဲ့ပါက နောက် လတွင် member level တိုးမြင့်ပြောင်းလဲ သွားမည် ဖြစ်သည်။
13. လက်ရှိ Member Level ၏ အသုံးစရိတ် ကို ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ခြင်း မရှိပါက ခံစားခွင့်များ မည်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်နည်း။
လက်ရှိ Member Level ၏ အသုံးစရိတ် ကို ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ခြင်း မရှိ ခဲ့ပါသော်လည်း လက်ရှိ Member Level ၏အကျိုး ခံစားမှူကို နောက် ၃ လ ကြာမြင့် သည်အထိ ခံစားခွင့် ရှိသည်။
14. Diamond, Platinum, Member ဆိုတာ ဘာလဲ။
Diamond, Platinum, Member ဆိုတာ အဖွဲ့ ဝင်များ မိမိရောက်ရှိနေသော အခြေအနေများကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။မိမိရောက်ရှိနေသော အခြေအနေ အလိုက် အခွင့် အရေးများကိုခံစားနိုင်သည်။
15. အဖွဲ့ ဝင် ၏ သက်တမ်းကာလမှာ မည်မျှနည်း။
အဖွဲ့ဝင်၏ သက်တမ်းကာလမှာ ၃လဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် များ၏ Member Level ပြောင်းလဲ မှုရှိ ပါက သုံးသပ် ချက်များကို လတစ်လ ၏ ၁ ရက်နေ့ တွင် အသိပေးစာတို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
16. Membership level များကို မည်သို့ ပိုင်းခြား ထားသနည်း။
Membership level ပိုင်းခြားမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း သိရှိနိုင် ပါသည်။
Membership level ပိုင်းခြားမှုများကို အသုံးပြု သူ၏ ၃လ ပျမ်းမျှ အသုံးစရိတ် ကို အခြေခံ ၍ level များကို သတ်မှတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Member – <=9,999MMK
Platinum – 10,000 MMK to 29,999 MMK
Diamond – >=30,000 MMK
17. Point များကို ရရှိကြောင်း မည်သို့သိရှိမည်နည်း။
ယနေ့အသုံးပြုလိုက်သော ဖုန်းငွေ ပမာဏ အပေါ် မူတည် ၍ နောက်တနေ့ တွင် မနက် ၉နာရီ မှ ညနေ့ ၃ နာရီ နောက်ဆုံး ထား၍ Point များကို ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။ Point မည်မျှရရှိ ကြောင်းကိုစာတို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
18. Point များကို မည်သို့ အချိန်အတိုင်းအတာ ဖြင့် တွက်ချက် သနည်း။
တနေ့အသုံးစရိတ် ၂၄ နာရီ ဖြင့် တွက်ချက်သည်။ ည ၁၂ နာရီ အထိ အသုံးစရိတ်များ ပါဝင်သည်။
19. အဘယ်ကြောင့် MPT Club ကို ဖုန်းဘေဖြည့် ရာမှ ပွိုင့် ရရှိနေမှု ကို usage သို့ ဖုန်းဘေ အသုံးပြုမှု အပေါ် ပြောင်းလဲလိုက် သနည်း။
MPT Club customer များကို ဖုန်းဘေ အသုံးပြု လိုက်တိုင်း ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင် များကို ပေးလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
20. Welcome Point Bonus ကို ဘယ်အချိန်ရမှာလဲ။
Welcome Point Bonus 50 points ကို ငွေဖြည့်စရာမလိုပဲ MPT Club ကို register ပြီးပြီးချင်း စတင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။သို့သော် ပထမ ဆုံး အ ကြိမ် အဖွဲ့ ၀င် သူများသာ Welcome Point Bonus 50 points ကို ငွေဖြည့်စရာမလိုပဲ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
21. Post Paid ကို အသုံးပြုသူတွေကရော MPT pointsဘယ်လိုရနိုင်လဲ။
ကျသင့်တဲ့ bill ကိုပေးဆောင်ပီးမှသာရနိုင်ပါသည်။
22. MPT Club ကို Unregister ပြုလုပ်ပါက Point လက်ကျန်များ ပျက်သွားမှာပါလား။
MPT Club ကို Unregister ပြုလုပ်ပါက Point လက်ကျန် များ ပြန်လည် ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
23. MPT Club Hti Pauk game ဆော့ ပြီး point ကို မည်သည့် အချိန် တွင် ရရှိမည်နည်း။
ချက်ချင်း လက်ခံရရှိ မည် ဖြစ်သည်။
24. MPT Club member များအတွက် ထိပေါက် game ၏ ပေါက်မဲ များမှာ မည်သည့် ပေါက်မဲ များဖြစ်သနည်း။
ပေါက်မဲ များမှာ Point များ ဖြစ်ပါသည်။ ဗလာမပါ။
100 Points တို့ ဖြစ်သည်။